स्वस्थ रहन यस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोस्
scheduleशनिवार जेष्ठ १७ गते, २०७७
काठमाडौँ, १३ मंसिर । मौसम, सुन्तला लगायतका रसिलो फलफूलमा भिटामिन सीका साथै भरपूर मात्रामा खनिज तत्व पाइन्छ । यसले शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । फलफुल सिधै, काटेर वा त्यसको जुस बनाएर पनि सेवन गर्न सकिन्छ । यस्ता फलफुल नुन वा चिनीको विना नै सेवन गर्नु उपर्युक्त हुन्छ ।
मुङ्ग, दाल, चना, केराउ, लगायतका टुसा उमारेको खानेकुरामा भरपूर मात्रामा पोषण तत्व पाइन्छ । यसलाई पचाउन समेत सजिलो हुने तथा शरीरका लागि पोषण प्रदान गर्ने हुदाँ यस्ता खानेकुरालाई धेरै भन्दा धेरै खानु उपर्युक्त हुन्छ ।
खानामा सलादको सेवन जति धेरै गर्यो, स्वास्थ्यका लागि त्यति राम्रो मानिन्छ । सलादले खानालाई पचाउन मद्दत गर्छ । काँक्रो , टमाटर, मुला, गाजर , प्याज, चुकन्दर सलादमा पर्दछ । यसमा नुनको मात्रा पर्याप्त हुने भएकोले थप नुनको आवश्यक्ता पर्दैन ।
गहु, मकै लगायतका अनाजमा प्रशस्त मात्रामा चोक्कर पाइन्छ । चोक्करको सेवन गर्नाले कब्जियतको समस्या हुँदैन र रोग प्रतिरोधी क्षमता पनि मजबुत हुन्छ ।
बहु गुणयुक्त तुलसी आफैमा एउटा औषधी हो । तुलसीमा एन्टीवायोटिक तत्व हुन्छ, जसउले गर्दा यसले दुखाई कम गर्नुका साथै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन मद्दत गर्छ । दिनमा ३देखि ५ वटा पत्ता तुलसीको सेवन गर्ना शरीरमा रोगको संक्रमण हुने सम्भावना न्युन हुन्छ ।
योग वा प्राणायामले शरीरलाई स्वस्थ तथा रोगमुक्त राख्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । त्यसैले, दिनमा कम्तीमा पनि आधा घण्टा योग तथा प्राणायाम गर्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ ।
बन्दाबन्दीमा पुदिना खाएर पाउनुहोस् यी फाइदाहरु
थप १८९ नयाँ संक्रमित भेटिए, कुल संक्रमितको संख्या १४०१ पुग्यो
महामारीपछि ४ करोड युवाले धुम्रपान सुरु गरेः विश्व स्वास्थ्य संगठन
थप १७० कोरोना संक्रमित थपिए, कुल संक्रमित १२१२ पुग्योः स्वास्थ्य मन्त्रालय
छालाको हिसाबले प्रयोग गर्नुहोस् यस्ता सेनिटरी प्याड
२७२ अस्पताल निर्माण गरिने
अब एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था नीति कार्यान्वयन गरिने
कोरोना महामारीविरुद्ध बजेटः ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन
देश, समाचार, स्वास्थ्य
अस्पताल बनाउन स्थानीय तहलाई १४ अर्ब विनियोजन
बजेटः स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ९० अर्ब ६९ करोड
के हो प्रोस्टेट क्यान्सर ? किन फैलिन्छ यति छिटो ?
फ्रान्समा पनि कोभिड-१९ विरुद्ध हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीन औषधि प्रयोगमा प्रतिबन्धत
अमेरिकामा यी ‘काला’ व्यक्तिको मृत्युका कारण किन भड्कदैँछ हिंसा ?
एजेन्सी, १७ जेठ । अमेरिकाको मिनेसोटा राज्यस्थित मिनेपोलिस शहरमा भीडले एउटा प्रहरी कार्यालयमा आगजनी गरिदिएका छन् । गत सोमबार...
ह्वाट्सएपमा चल्दैछ यस्तो घातक स्क्याम, रहनुहोस् सचेत
एजेन्सी, १७ जेठ । छिटो तथा छरितो म्यासेजिङ एपको रुपमा चर्चित ह्वाट्स एपको प्लेटफर्ममा फर्जी खबरहरुको अहिले बिगबिगी फैलिएको...
चीनको कठपुतली बनेको भन्दै ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग सम्बन्ध अन्त गरे
वासिङ्गटन, १७ जेठ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) सँग आफ्नो सम्बन्ध अन्त्यको...
लकडाउनमै सुरु हुने भयो फिल्म ‘अवतार’ को छायांकन, अन्य चार भाग कहिले ?
एजेन्सी, १७ जेठ । मार्बल स्टुडियोको गत साल रिलिज भएको फिल्म ‘एभेन्जर्सः एन्डगेम’ भन्दा पहिलो सबैभन्दा धेरै कमाई गर्ने फिल्म...